Ny lalao ping pong 6 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Aaron Rivas | 10/07/2021 08:00 | Fampiharana Android, Lalao Android
Ny ping pong dia iray amin'ireo fanatanjahan-tena ambony latabatra eran'izao tontolo izao, koa izy io dia iray amin'ireo nilalao indrindra. Ary ny latabatra manokana fotsiny no ilainao, ny alika sasany na ny latabatra tenisy ambony latabatra - izay anarana hafa ahafantarana ilay lehilahy. ping- ary baolina vitsivitsy. Amin'izany dia afaka milalao mpilalao tsy latsaky ny roa ianao. Na izany aza, azo lalaovina amin'ny finday ihany koa izy io, ary izany no antony anoloranay anao izany fanangonana izany.
Izahay dia mitanisa andian-dahatsoratra Ny lalao ping pong 6 tsara indrindra ho an'ny Android, mba hahazoanao ilay tianao indrindra. Maimaimpoana ary misy ao amin'ny Play Store daholo. Ho fanampin'izay, izy ireo dia iray amin'ireo manana ny lazany tsara indrindra, miaraka amin'izay koa izy ireo dia iray amin'ireo nampidina sy nilalao indrindra.
Ity ny fanangonana ireo lalao ping pong 6 tsara indrindra ho an'ny finday Android. Ilaina ny manasongadina indray, toy ny fanaontsika hatrany, izany Maimaimpoana ny lalao rehetra ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola ao anaty, izay ahafahan'ny fidirana amin'ny atiny bebe kokoa ao anatiny, ary koa ny fampiasa premium, fanampiana, loka, valisoa ary maro hafa. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao hanatona azy.
1 Mpanjaka Ping Pong aho 🙂
2 Tompondakan'ny tenisy ambony latabatra
3 Tenisy latabatra 3D
4 Pongfinity - Ping Pong tsy manam-petra
5 Champ tenisy amin'ny latabatra eran-tany
6 Tenisy latabatra virtoaly
Mpanjaka Ping Pong aho 🙂
Atombotsika amin'ny lisitra Ping Pong King ity lisitra ity, lohateny tena mahaliana izay tsy maintsy hiatrehanao mpifaninana 16 ary handresy azy ireo ho lasa mpanjaka tenisy ambony latabatra. Manana sary tsotra izy io, saingy mampiavaka azy manokana, ary azo lalaovina amin'ny tanana iray monja. fotsiny tsy maintsy ataonao amin'ny lafiny iray ny toetra amam-panahy, manandrana mamerina ny baolina ary manjary resy ny mpanohitra.
Tsara ny mpifaninana. Mazava ho azy, amin'ny voalohany dia ho mora resy izy ireo, saingy ho hitanao avy eo ny fomba mahasarotin'ny raharaha. Ny tsirairay dia samy manana ny fahaizany samy hafa izay mety hahatonga anao ho resy; ny hafetsena dia ny mamely ny baolina hatrany amin'ny kapoka. Ny teboka tsirairay tratra dia manakaiky anao amin'ny farany.
Amin'ity lalao ity dia tsy afaka milalao ping pong fotsiny amin'ny fomba mampiala voly sy mahafinaritra. Azonao atao ihany koa ny manatsara ny reflexes sy ny valin'ny fanehoan-kevitra, izay manampy anao hivoatra amin'ny lalao tena izy koa. Ho setrin'izany, ilay stickman, izay toetran'ny lalao, dia manana dihy samihafa sy sarimiaina mahatsikaiky izay tsy hitondra anao amin'ny fotoana rehetra.
Mpanjaka Ping Pong King aho 🙂
Tompondakan'ny tenisy ambony latabatra
Lalao Ping Pong tsara hafa koa ny Tompondakan'ny Tenisy Tabilao, iray izay manana sary mahafinaritra, sary mihetsika voaforona tsara, ary feon-kira tena tsara. Ity anaram-boninahitra ity dia voatanisa ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny karazany rehetra, ary tsy ho zava-poana fa mirehareha naoty 4.1-kintana hajaina ao amin'ny Play Store sy fanehoan-kevitra miabo 100 XNUMX mahery.
Ity lalao ity dia mirehareha amin'ny sary 3D tsotra, saingy tena tsara, ary ny fihetsehana dia mahitsy. Raha izany dia, Milalao marindrano izy io ary mila mikorisa ny rantsan-tànanao ianao hamelezana ny baolina, tsy mila ado intsony. Tsy maintsy miatrika mpilalao marobe ianao, samy sarotra ny tsirairay noho ny iray hafa, ary samy manana ny teknika sy ny fahaiza-manao izay afaka mivadika amin'ny lalao mora mankany amin'ny sarotra amin'ny resaka ambaratonga vitsivitsy. Ampiofano sy satromy ny tenanao ho mpilalao ping pong tsara indrindra amin'ny rehetra.
Misy scenario 50 mahery ahafahanao miasa amin'ny maha mpilalao mahay anao. Miezaha ho mpandresy amin'ireo tsirairay ireo ary aza mamindra fo amin'ireo mpifaninana aminao. Misy ihany koa ny fifaninanana tenisy ambony latabatra iraisam-pirenena hahafahanao miavaka. Azonao atao koa ny manangana ekipa ping pong anao manokana ary milalao amin'ireo ekipa mahay hafa
Developer: Lalao zirafy voafetra
Tenisy latabatra 3D
Araky ny anarany, 3D Tenisy Latabatra dia lalao manana sary tsara sy sary XNUMXD. Tsotra ihany koa ity lalao ity, saingy tsy mijanona ho iray amin'ireo tena alaina indrindra izy io, raha jerena ny dinamika mahaliana asehony.
Milalaova amin'ny ligin'ny tenisy ambony latabatra iraisam-pirenena, izay ahafahanao misafidy ny firenena tadiavinao indrindra hisolo tena azy, ary asehoy izay mahamety anao, mifaninana amin'ireo mpilalao marobe, samy manana fahaiza-manao lehibe ka manahirana azy ireo ny mandresy amin'ny lalao. Raha tsy dia mahay mivezivezy amin'ny rantsan-tànanao ianao mba hikapohana ny baolina ary hamerina izany amin'ny mpifanandrina, Mampiofana ary lasa iray amin'ireo mpilalao tsara indrindra alohan'ny hanomezana ny tena ady.
Etsy ankilany, ity lalao ity dia misy fifaninanana lehibe izay misy fiadiana ny tompon-daka eran-tany ary fifaninanana ping Pong ary fiadiana ny tompondaka, mba hahafahanao maka ny satro-boninahitra ary miavaka amin'ny maha-mpanjaka tenisy ambony latabatra anao. Misy ihany koa ny maody momba ny kariera, izay misy laharana sy takelaka mpitarika izay tokony hanandramanao ho voalohany. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mamoha zava-baovao ianao, toy ny maodin-dalao isan-karazany ary aza mijanona milalao ping pong.
Pongfinity - Ping Pong tsy manam-petra
Pongfinity dia lalao hafahafa amin'ny lafiny maro, fa iray indray mandeha ary io no manaraka: tsy manam-petra izy, araka ny anarany. Ary ity lalao ity dia mamirapiratra ihany koa noho ny fahatsorany sy ny dinamika tsara, izay tsy maintsy hikasihanao hifindra amin'ny lafiny iray mankany amin'ny lafiny iray ary hikorisa hamely ny baolina ary hamerina izany amin'ny mpifaninana aminao.
Ity lalao tenisy latabatra ity ho an'ny Android koa Izy io dia manana toerana sy scenario ahafahanao milalao ary mampiditra lohahevitra volkano, ala mikitroka ary maro hafa, zavatra izay mahatonga azy tsy ho monotonous amin'ny fotoana rehetra ary tsy mankaleo na inona na inona eto an-tany.
Azonao atao ny manatsara ny ekipanao ho lasa tsy mety resy ary manome satroboninahitra ny tenanao ho mpilalao ping pong tsara indrindra amin'ity lalao ity ary miditra amin'ny zavatra mahafinaritra milalao koa. Ary koa, manana endri-tsoratra mahafinaritra toa an'i Emil, Miikka ary Otto, izay ahafahanao manatanteraka zava-bita isan-karazany sy mamita ireo fanamby amin'ny latabatra isan-karazany. Ny zavatra iray hafa dia ny ahafahanao mandray anjara amin'ny filaharana manerantany, izay ahafahanao mampiseho izay namoronana anao.
Ity lalao ity dia misy sary kely indrindra, tsotra ary mahasarika. Izy io koa dia manana isa kintana 4.6 ao amin'ny Google Play Store ho an'ny smartphone Android, noho izany dia lalao ping pong hafa tsara hilalao na aiza na aiza no tianao.
Developer: Fialamboly Linnama
Champ tenisy amin'ny latabatra eran-tany
Raha te hanandrana lalao ping pong hafa ianao miaraka amin'ny sary 3D, sary ary sarisary XNUMXD tsara tarehy, safidy tsara hafa ny World Tennis Champ. Ary ity lohateny ity dia manolotra maodin-dalao maromaro azonao isafidianana, miaraka amin'izany tsy maintsy miatrika mpanohitra maromaro ianao, ny tsirairay dia sarotra kokoa sy mahay kokoa noho ny iray hafa, noho izany dia tsy maintsy mihatsara ianao hatramin'ny lalao voalohany mandra-pahazonao ny teknika ary tsy ho resinao.
Hatsarao ny fahatsapanao, ny fahaiza-manaonao ary ny reflexes raha manokatra ny kianja sy ny sarin-javatra samy hafa amin'ny 3D ianao (misy mihoatra ny 16 izay misy). Ho setrin'izany, mianika ny tabilao lohataona hahazoana ny anaram-boninahitra tompon-daka tsy azo iadian-kevitra. Ianao koa dia manana fomba lalao sy lalao kely samihafa hampifalifaliana anao amin'ny fotoana rehetra, hahafahanao mianatra sy mampihatra tenisy latabatra mihitsy aza.
Ao amin'ny World Champ Tennis amin'ny latabatra azonao atao ny manamboatra ny raketinao na ny zana-kazo ping pong araka izay tianao, miaraka amin'ny loko tianao. Betsaka ny fiovaovana, fitaovana ary loko azonao isafidianana ny fanaovana ny raketinao ho manintona sy be mpitia indrindra indrindra. Ankoatr'izay, azonao atao ny mamoha maodely vaovao amin'ny raketa, saingy, raha te hanao izany dia tsy maintsy mandroso amin'ny lalao ianao ary handresy ireo mpifaninana aminao.
Ataovy ao an-tsaina fa misy raketa manana fahaiza-manao manokana izay hahatonga ny lalao ho mafy orina kokoa, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa sy ny hetsika baolina samihafa izay tsy hanome ny mpanohitra anao vintana hiverina.
Amin'ny lafiny iray, azonao atao ny milalao tanana ity lalao tenisy latabatra ity amin'ny tanana iray monja, mahatonga azy io tena ahazoana aina. Ho fanampin'izay, azonao atao ny manefy ny fomba fijery eo anelanelan'ny akaiky sy ny mahazatra ary ny lavitra, mba hifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao ny zava-drehetra. Azonao atao ihany koa ny milalao sy mahazo valisoa sy loka ao anatin'ny lalao.
Tenisy latabatra virtoaly
Mba hamaranana ity lahatsoratra fanangonana ny lalao ping pong tsara indrindra na lalao tenisy latabatra ity ho an'ny Android, dia manolotra anao amin'ny tenisy latabatra virtoaly izahay, lohateny iray hafa izay ho tianao tokoa, na amin'ny sary na amin'ny fomba filalaovany izay ireharehany.
Ny fiasa mahaliana indrindra amin'ity lalao ity angamba, dia izany Azo lalaovina amin'ny fomba multiplayer amin'ny Internet na Bluetooth miaraka amin'ireo mpilalao hafa izy io. Ny zavatra hafa dia izy no mety ho ilay zava-misy mety indrindra eto amin'ity lisitra ity, noho ireo sary 3D misy ambaratonga avo lenta. Izy io dia manana maodin-dalao marobe mavitrika tokoa, raketa samihafa azonao ampiasaina mba ho mpilalao ping pong tsara indrindra sy maro hafa.
Developer: Lalao SenseDevil
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny lalao ping pong 6 tsara indrindra ho an'ny Android